SHEEKO CAJIIB AH: Daafaca Juventus Medhi Benatia oo DIINTIISA ISLAAMKA darteed u diiday inuu ku biiro Man United iyo Arsenal isagoona….!!! – Gool FM
(Europe) 08 Feb 2019. Daafaca Juventus Medhi Benatia ayaa daaha ka rogay in Diintiisa Islaamka Darteed uu u diiday inuu u soo dhaqaaqo kooxaha Manchester United iyo Arsenal oo si aad ah u doonayay.
31-jirka reer Morocco ayaa doortay inuu u dhaqaaqo horayaalka dalka Qatar suuqii kala iibsiga ee dhawaan xirmay.
Benatia oo kulankiisii ugu horreeyay u saftay kooxdiisa Cusub ee Al Duhail ciyaar ay shalay guul darro 1-0 kala kulmeen Al Gharafa ayaa qiray inuu fahmi karo dhaleeceymaha ku aadan go’aanka uu ugu dhaqaaqay Horyaalka Carabta xilli si wayn looga doonayay Premier League.
Daafaca reer Morocco oo sharaxayay sababta uu u diiday kooxaha Yurub ayaa sheegay in uu doonayo in Caruurtiisa ay ku bar-baaraan Dal Muslim ah.
“Waxaan dhaleeceymo kala kulmay Ciyaaraha Morocco, kuwaa oo i dhaleeceeyay markii aan u soo dhaqaaqay Doha laakiin waxaan doonayaa in qofkasta uu tixgaliyo go’aankeyga maxaa yeelay wuxuu ahaa go’aanka ugu fiican reerkeyga iyo anigaba,”, Daaficii hore ee Roma, Bayern Munich iyo Juventus ayaa sidaa yiri.
“Waxaan doonayaa in Caruurteyda ay ku koraan Dhul Islaam ah, waxaan aadi karay kooxo ka dhisan UAE iyo Saudi Arabia laakiin waxaan doorbiday Al Duhail.
“Waxaa halkaan jooga ciyaartoy badan oo reer Morocco ah kuwaa oo u ciyaara xulka qaranka waxayna ka mid yihiin kooxaha Gacanka Carbeed.
“Si fiican ayuu ii garanayaa Tababaraha Morocco Herve Renard, haddii uu u arko inaan u qalmin inaan ka mid noqdo xulka Qaranka waan tixgalin doonaa go’aankiisa.”.
Benatia ayaa Kabtan u xirnaa xulka qaranka Morocco koobkii Adduunka ee sanadkii tagay lagu qabtay Faransiiska wuxuuna u saftay 55-kulan guud ahaan.